Ajụjụ Ahịa - Shanghai Balmxy Pharmaceutic Co., Ltd.
Amino acid na ihe ndi ozo ha
Boric acid na usoro borate
Usoro usoro nke Heterocyclic
Morpholine na usoro ya
Omume ndị ọzọ na-etiti
R&D na Innovation
Ọnụahịa mbufe na-adabere n'ụdị ị họọrọ iji nweta ngwa. Express na-abụkarị ndị kacha ọsọ ọsọ mana ọ kachasị ọnụ ụzọ. Site na mmiri nke oke osimiri bu uzo kacha mma maka oke. Gharịrị ọnụ ahịa enwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa ego, ịdị arọ na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Yulọ ọgwụ Xinyuan bụ ụlọ ọrụ teknụzụ na-apụta apụta na R&D, mmepụta na ire ahịa kemịkal na API dị mma.